7 Facts Momba An'i Jesosy Mety Tsy Fantatrao
Fahagagana mahavariana momba an'i Jesoa Kristy
Eritrereto hoe mahalala tsara an'i Jesosy ve ianao?
Amin'ireto zava-dehibe fito ireto, dia hahita zava-baovao hafahafa momba an'i Jesôsy miafina ao amin'ny pejin'ny Baiboly ianao. Jereo raha misy vaovao aminao.
1 - Teraka talohan'ny nieritreretantsika i Jesoa.
Ny kalandary amin'izao fotoana izao, izay heverina fa manomboka amin'ny fotoana nahaterahan'i Jesoa Kristy (AD, anno domini , latina ho an'ny "taona amin'ny Tompontsika") dia diso.
Fantatsika avy amin'ireo mpahay tantara romanina fa maty i Heroda tamin'ny 4 TK Tany am-piandohana anefa i Herôda fony izy mbola velona. Raha ny marina dia nodidian'i Heroda ny zazalahy rehetra tao Betlehema roa taona ary ny tanora no novonoina , tamin'ny fiezahana hamono ny Mesia.
Na dia niadian-kevitra aza ny daty, dia nitranga ny 6 am.fi BC ny fanisam-bahoaka voalaza ao amin'ny Lioka 2: 2. Nandray an-tsoratra ireo zavatra ireo sy ireo tsipiriany hafa, dia teraka teo anelanelan'ny 6 sy 4 a.
2 - Niaro ny Jiosy nandritra ny fivoahana i Jesosy.
Miara-miasa foana ny Trinite . Rehefa nialokaloka tany amin'i Farao ny Jiosy , tamin'ny antsipiriany tao amin'ny bokin'ny Eksodosy , dia nanampy azy ireo tany an-tany efitra i Jesosy. Ity fahamarinana ity dia nasehon'ny apostoly Paoly ao amin'ny 1 Korintiana 10: 3-4 hoe: "Izy rehetra dia nihinana ny fihinana ara-panahy sy ny zava-pisotro ara-panahy ihany, fa nisotro tamin'ny vatolampy ara-panahy niaraka taminy izy, ary Kristy izany vatolampy izany." ( DIEM )
Tsy io fotoana io ihany no nahatonga an'i Jesosy nandray anjara mavitrika tao amin'ny Testamenta Taloha.
Maro ireo fisehoan-javatra hafa, na teophanies , no voarakitra ao amin'ny Baiboly.
3 - Tsy mpandrafitra fotsiny i Jesosy.
Milaza ny Marka 6: 3 fa i Jesosy dia "mpandrafitra", nefa azo inoana fa nanana fahaizana maro momba ny fanorenana izy, ary afaka niasa tamin'ny hazo sy vato ary metaly. Ilay teny grika nadika hoe mpandrafitra dia ny "tekton", teny iray taloha izay miverina amin'ilay poety Homer , fara fahakeliny 700 talohan'i JK
Raha nanondro ny mpiasa iray tao anaty kitay ny tekton, dia nanitatra ny fotoana mba hampidirana fitaovana hafa. Misy manam-pahaizana momba ny Baiboly milaza fa tsy dia nisy firy ny hazo tamin'ny andron'i Jesosy, ary vita tamin'ny vato ny ankamaroan'ny trano. Azo inoana fa nandeha tany Galilia manontolo i Jesosy, ka nanorina synagoga sy trano hafa.
4 - Niresaka telo i Jesosy, angamba fiteny efatra.
Fantatsika avy amin'ireo Evanjely izay noresahin'i Jesoa tamin'ny teny Aramaika, ny fiteny andavanandron'ny Isiraely fahiny satria ny teny aramianina sasany dia voarakitra ao amin'ny Soratra Masina. Amin'ny maha Jiosy feno fankasitrahana azy, dia niteny Hebreo koa izy, izay nampiasaina tamin'ny vavaka tao amin'ny tempoly. Nisy synagoga maro anefa nampiasa ny Septuagint , Soratra Hebreo nadika tamin'ny teny grika.
Rehefa niresaka tamin'ny Jentilisa izy, dia mety ho niresaka tamin'ny teny grika i Jesosy, ilay fiteny momba ny varotra avy any Moyen-Orient tamin'izany fotoana izany. Na dia tsy fantatsika aza izany, dia mety niresaka tamin'ny kapiteny romanina tamin'ny teny latina (Matio 8:13) izy.
5 - Azo inoana fa tsy tsara tarehy i Jesosy.
Tsy misy famaritana ara-batana momba an'i Jesoa ao amin'ny Baiboly, fa i Isaia mpaminany dia manome fanazavana manan-danja momba azy: "Tsy nanana hatsaran-tarehy sy maji-trano izy mba hisarika antsika ho any aminy, tsy misy na inona na inona ao amin'ny fisehoany izay tokony haniriantsika azy." (Isaia 53: 2b, NIV )
Satria nanenjika an'i Roma ny Kristianisma, ny mozika kristiana tranainy indrindra mampiseho an'i Jesosy dia avy amin'ny sary 350 eo ho eo. Sary mampiseho an'i Jesosy amin'ny volo lava no mahazatra any amin'ny Moyen-aina sy ny fahatsiarovana, saingy nilaza i Paoly ao amin'ny 1 Korintiana 11:14 fa ny volo lava amin'ny lehilahy dia "mahonena . "
Nitsangana i Jesosy noho ny zavatra nolazainy sy nataony, fa tsy tamin'ny fomba fijeriny.
6 - Gaga i Jesosy.
Imbetsaka i Jesosy, fara fahakeliny, dia nampiaiky volana ny fisehoan-javatra. Gaga izy noho ny tsy fisian'ny finoan'ny olona azy tany Nazareta ary tsy afaka nanao fahagagana tany. (Marka 6: 5-6) Gaga koa ny manam-pahefana romanina iray, dia ny Jentilisa, araka ny nomarihina ao amin'ny Lioka 7: 9.
Efa ela ny Kristianina no nanohitra ny Filipiana 2: 7. Ny Fandikan-teny Protestanta Vaovao dia milaza fa "nopotehina" i Kristy, raha toa kosa ny Fandikan- teny ESV sy NIV dia nilaza fa "tsy nanao na inona na inona" i Jesoa. Mbola mitohy ny adihevitra mikasika ny hoe ny fandosiran'ny herin'Andriamanitra na ny kenôzôsa dia midika fa i Jesosy dia sady Andriamanitra tanteraka ary feno tanteraka amin'ny fahatongavany .
7 - Tsy vegan i Jesoa.
Ao amin'ny Testamenta Taloha, Andriamanitra Ray dia nametraka rafitra sorona biby ho toy ny ampahany manan-danja amin'ny fanompoam-pivavahana. Mifanohitra amin'ny fitsipika maoderina maoderina izay tsy mihinan-kena eo amin'ny fitondran-tena, dia tsy nametraka ny fepetra toy izany tamin'ireo mpanara-dia azy Andriamanitra. Nomeny koa ny lisitr'ireo sakafo tsy madio, toy ny kisendrasendra, bitro, zavaboary rano tsy misy vanja na maingoka, ary ny androngo sy bibikely sasany.
Amin'ny maha Jiosy mpankato azy, i Jesoa dia nihinana ny zanak'ondrin'ny Paska izay nanompo tamin'io andro masina io. Ireo Evanjely koa dia milaza momba an'i Jesoa mihinana trondro. Natao ho an'ny Kristianina ny famerana ny sakafo.
> (Sources: Bible Knowledge Commentary , John B. Walvoord sy Roy B. Zuck, New Bible Commentary , GJ Wenham, JA Motyer, DA Carson, RT France, tonian-dahatsoratra, Holman Illustrated Bible Dictionary , Trent C. Butler, Ny diksionera Bible Dictionary , RK Harrison, mpanoratra, gotquestions.org.)
Hitady an'i Absaloma: Zanak'i Davida Mpanjaka, mpikomy
Ny finoana an'i Sarah Palin
Fikajiana fanovozan-kevitra: Fo sy Inch
Ahoana ny fanipazana fanoherana
Structure of Lewis or Electron Dot Structures
Cixi, mpanelanelana an'i Qing China
Eritrereto ny fambolena plastika eny an-tokotaninao
HORSE Poker Lalao fitsipika - Ahoana no hilalao Poker Game Poker
Spider-Man Characters - Comic Marvel
Mahatsiaro mafana indrindra maneho ny fikomiana momba ny oram-baratra volom-borona trompetra
Mamadika an'i Pascals amin'ny atmosfera ohatra
10 biby mampidi-doza indrindra
Fomba hananana mpiray efitra anao
Tantaran'ny marina momba ny demony
Mampianatra sora-kevitra amin'ny fampiasana modely
Anjely lahy sa vavy?
Tenor Fächer: Inona ny karazana asa sahaninao?
Scorpio Report: Ny Occuls and Cultural Sorcery
Mars ao amin'ny famantarana Leo-Mars
Ahoana no Hahazoanao mamirapiratra amin'ny tara-maizina?
Ady tamin'ny 1812: Famonoana an'i Fort Wayne
Ny Faha-UFO tsara indrindra